Goobaha Khadka Tooska ah ee Giriigga - Xeerarka Koodhadhka Khadka Tooska ah ee Khadka
(345 votes, celcelis ahaan, 4.00 out of 5)
Loading ...Tobankii sano ee la soo dhaafay waxaa si aad ah u kordhay tirada casinos ee Giriigga. Sida qaybaha kale ee warshadaha dalxiiska ee Giriigga, casinos-ka Giriiggu waxay ku dadaalayaan inay soo jiitaan ciyaartoy sannadka oo dhan mana aha oo kaliya inta lagu jiro fasaxa xagaaga ee caanka ah. Iyada oo qayb ka ah dadaalladaas, casino Giriiggu wuxuu raacay qaabkii Las Vegas. Waxay u muuqdaan inay qayb ka yihiin hudheelada waaweyn / hoteelada, oo bixiya hoy raaxo leh, madadaalo, nashaadyo isboorti, bandhigyo madadaalo. Suuqgeynta Casino waxaa badanaa loogu talagalay dalxiisayaasha ajnabiga ah, in kasta oo cayaaraha kaararka si aad ah looga jecel yahay dhaqanka Griiga, Griigana waxaa jira kumanaan kaararka kaararka lagu ciyaaro oo ku yaal waddanka oo dhan oo aan ahayn casinos.
Liiska Saacadaha 10 Goobaha Goobta Kubadda Cagta ee Giriigta
Maanta safarkeenna ugu fiican ee casinos-ka Yurub si aan uga sii wadno dalxiisyada dalxiiska ee ku teedsan xeebta Mediterranean-ka oo leh taariikh hodan ah. Dalkani wuxuu caan ku yahay ciyaarihii ugu horreeyay ee Olombikada, cunnooyinka aan lala tartami karin iyo falsafadleyda. Marka, CasinoToplists ayaa loo diray Griiga!
Griiga - juquraafi ahaan iyo in yar oo taariikhda ah;
Kantaroolka «Mont Parnes».
Sharciga sharci-dejiyeyaasha maxalliga ah, waxay ku dhowdahay inay xaday midab;
Hawlwadeennada caalamiga ah ayaa si ficil ahaan loo xakumay iyada oo aan lahayn liisan.
Shan ka mid ah caasimadda Giriigga ah ee Atina oo ku yaal cinwaanada;
Xaqiiqooyin la yaab leh oo ku saabsan Giriigga iyo Giriigta.
Khamaarka Griiga wuxuu leeyahay taariikh dheer oo soo jireen ah oo soo jireen ah. Giriiggii hore waxay ahaayeen ciyaartoy xamaasadaysan waxayna aaminsan yihiin asalka rabbaaniga ah ee ciyaaraha. Tusaale ahaan, quraafaadyada Griigga, waxaa ku jirta sheeko ah in guushii Titans ka dib, Zeus iyo walaalihiis Poseidon iyo Hades ay saami riteen si ay u go'aamiyaan cidda heleysa mid ama qeybta kale ee adduunka. Zeus wuxuu ku guuleystey Olympus, Poseidon - badda, iyo Hades - dhulka hoostiisa. Qeybinta qoraallada ma aha mid aad muhiim u ah, waxaa xiiso badan xaqiiqda ah in awoodda adduunka lagu ciyaaray lafaha.
Halyeey xiiso leh oo sharraxaya asalka khamaarka iyo casinos. Mar Tycho, ilaahadda nasiibku, waxay ku dhex socotey geedihii Asheeraah ee hadheeyey ee Olympus, halkaas oo Zeus (oo markaa ahayd ciyaartooy da 'yar iyo libertine) ay sasabatay. Ururkan waxaa ku dhashay gabar - ilmo aan caadi ahayn, oo kaliya in lagu farxo abuurista ciyaaro kala duwan halka natiijada kaliya lagu go'aansado kiis. Waxay si farxad leh u eegtay muranka ka dhex dhacay ciyaartoyda waxayna ku boorrisay kuwa qasaaray inay niyad jabaan. Iyada oo ku raaxeysaneysa gabadheeda naxariis darrada ah, waxay si aamusnaan ah u siisay guryo, oo laga galo marinkeeda, oo sasabanaya dadka jidka maraya, waxay gubeen nal aan shidanayn.
Quraafaad ka sokow sheeg khamaarka iyo shakhsiyaadka taariikhiga ah ee dhabta ah. Sidaa darteed, "Odyssey," Homer wuxuu sheegayaa sheekada sida qayliyayaashu u soo bandhigeen laadhuu, si ay u madadaaliyaan askarta Griiga, iyagoo caajisan sugaya go'doominta Troy. Taariikhyahan Griig ah Plutarch wuxuu xusayaa boqorad reer Faaris ah Parisatis, oo ahayd qof jecel ciyaarta ciyaarta laadhuuga.
Craps waxaa laga keenay Griiga oo ka yimid Aasiya waxayna caan ku ahayd dhamaan qaybaha bulshada. Waxaa jira meelo qaas ah - Kaadi-bixiyeyaasha loogu talagalay ciyaaraha abaabulan. Si kastaba ha noqotee, inta badan xildhibaannada Giriigga ee loo gudbiyo khamaarka waa laga xumaaday, iyagoo tixgelinaya madadaalada noocan ah inay caqabad ku tahay anshaxa dadweynaha, taasoo wiiqaysa aasaaska dowladnimada. Ciqaabta ciyaartoyda aan la saxi karin, iyadoon loo eegin meelahooda bulsheed, waxay u adeegeen addoomo.
Griiga casriga ah wuxuu abuuray xaaladaha dalxiiska, khamaarka laxiriira, sidoo kale wuxuu xakameynayaa suuqa gemblingovy iyadoo loo marayo mas'uuliyiinta awooda leh. Dabeecada Griiga ee khamaarka waa mid aad u adag, siyaasada dowlada waxaa looga dan leeyahay in laga hortago dadka khamaarka. Sida uu qabo sharciga Griiga, khamaarka ciyaarta waxaa kaliya oo loo ogol yahay gudaha qamaarka. Dhammaan noocyada kala duwan ee sharadka iyo khamaarka ka baxsan casinos-ka si adag ayaa loo mamnuucay, ku xadgudubka sharciga maxalliga ah wuxuu bixiyaa mas'uuliyadda dambiilenimo.
Kasiinadii ugu horreysay ee Giriigga waxaa laga aasaasay 1928 aagga Loutraki, kaliya kaliya hadda waxay socotaa 9 casinos sharciyeed oo dalka ku yaal. hawlgalka casinos ee Giriigga ayaa nidaamiya Komishanka Khamaarka, kaas oo la aasaasay Diseembar 20, 2011. Bishii Oktoobar 2013 waxaa la go'aamiyay baaxadda waxqabadkeeda: shatiyeynta, kormeerka iyo xakameynta casinos-ka dhulka ku saleysan ee waddanka. Guddigu wuxuu ka kooban yahay siddeed xubnood iyo guddoomiye, oo loo doorto muddo shan sano ah. Ruqsadihii ugu horreeyay waxaa la soo saaray 1994, saddexda casinos: Casino Mont Parnes, Casino Korfu iyo Casino Rodos. Griiga gudaheeda, ma jiraan wax keli ah: dhammaan casinos-yada ku jira gacanta hawl wadeenno kooban. Waxa ugu weyn iyaga ka mid ah Regency Casino, oo ay ku jiraan casino Casino Mont Parnes ee Thessaloniki.
Sannadkii 2002, dowladda Griiga waxay soo saartay sharci muran badan dhaliyay 3037/2002, kaasoo mamnuucaya ciyaarta dhammaan ciyaaraha elektaroonigga ah ee ka dhaca goobaha dadweynaha. Sharcigan adag waxaa la laalay kaliya bishii Ogos 2011. Sharciga cusub wuxuu dejinayaa mabaadii'da ciyaaraha mas'uulka ka ah wuxuuna soo bandhigayaa waxa loogu yeero shaqsiyaadka "kaararka ciyaaryahanka" ee loo baahan yahay si ay awood ugu yeeshaan inay si sharci ah ugu qamaaraan Giriigga. Si aad ugu awoodo inaad ku ciyaarto casino, Griiggu waxay gaareen da'da 21 sano.
Xagee, goorma iyo waxa la ciyaarayo casaankii Gariiga?
Xilligan, Giriiggu wuxuu shaqeeyaa sagaal casinos oo shatiyeysan. Waxay ku yaalliin dhul-weynaha iyo jasiiradaha Giriigga ee Rhodes, Syros iyo Corfu. Kasiinooyinka badankood way furan yihiin Isniinta ilaa Axadda waxayna shaqeeyaan 24 saacadood maalintii. Dhammaantood waa cayaaro caan ah sida roulette, blackjack, video poker, Punto Blanco, Baccarat iyo mashiinnada ciyaarta. Sidoo kale martigaliya tartamada turubka. Nambarka labiska ee inta badan casinos-ka Griiga - caqli-gal ah, laakiin ha isku dayin inaad gudaha gasho dharka xeebta.
Casino Loutraki - Casaankii ugu horreeyay ee Giriigga. Waxay ku taalaa hudheelka hudheelka ah ee caanka ah ee loo dalxiis tago ee Loutraki-Agioi Theodoroi. Kani waa mid ka mid ah casinos-yada ugu waaweyn Yurub, oo waliba ku faano isboorti iyo xarumo shirar. Intaa waxaa dheer, ciyaartoydu waxay ciyaari karaan waqtigooda firaaqada ah si ay ugu raaxaystaan ​​indhaha aagga, sida Kanaalka Korantada, Matxafka Ethnographic iyo Macbadka Apollo, Corinthians.
2. Bandhigga Casriga ee Thessaloniki
Kani waa casinos-ka ugu caansan Giriiggu wuxuu ku yaal magaalada Thessaloniki, "caasimadda woqooyiga" ee Giriigga, iyo ilaa 1996. Waxay ku taal meel u dhow garoonka diyaaradaha ee Makedoniya waana baabuur 20-daqiiqo ka socota meelaha muhiimka ah ee magaalada. . Dhismaha casino ayaa lagu qancay qurxinta hodanka ah. Kasiinadu waxay bixisaa 893 mashiinno naadi iyo 66 miis oo loogu talagalay ciyaaraha guddiga. Waxa kale oo jira qol gaar ah oo loogu talagalay High Rollers Club Regency, oo leh 18 mashiinno naadi iyo 14 miis oo loogu talagalay ciyaaraha guddiga.
3rd Casino Casino Rhodes
Rhodes Casino waxay caan ku tahay naqshadaha qadiimiga ah iyo qaabeynta gudaha. Waxay si buuxda uga tarjumaysaa jawiga bartamihii hore ee magaalada waxayna ku taal aagga hudheelka raaxada ee Grande Albergo delle Rose boutique hotel. Waxay leedahay wax walba oo lagu madadaaliyo ciyaartoyda: mashiinnada ciyaarta, miisas badan oo turub ah, roulette iyo ciyaaro kale. Kasiinadu waxay ku shaqeysaa lambarka dharka: 19.00 oo loo oggol yahay dharka saxda ah iyo midka gudaha, iyo wixii ka dambeeya 19.00 - oo kaliya dharka fiidkii, dharka ama dharka.
Magaalada Corfu, oo ah caasimadda jasiiradda Corfu, waxay ka shaqeysaa mid ka mid ah naadiyadii ugu horreeyay ee Giriigga, iyo 1962 waxay ahayd khamaarkii ugu horreeyay ee Giriigga, oo dib ugu soo laabanaya wareegga wareegga. Hadda waxay ku taal xarunta madadaalada ee Corfu Holiday Palace, illaa iyo dhammaadkii 80-xiriir ee qarnigii 20aad waxay ku yaalliin qasriga Empress Elizabeth ee Austria-Hungary, halyeeyga Princess Sissi. Makhaayadu waxay u furan tahay laga bilaabo 20.00 illaa 03.00 martida soo booqata 23 sano.
Casingu wuxuu ku yaalaa aagga kaynta ee Lefkos Pyrgos, oo ku taal qaybta waqooyi-galbeedka Xanthi.
Qaab dhismeedka dhismaha labada dabaq ah (2200 sqm) wuxuu la jaan qaadayaa weynaanta geedaha dhaadheer ee ku hareeraysan, abuuritaanka meel gaar ah ayaa ka yaabisa martida daqiiqada ugu horeysa. Griiggu waxay ku kaftameen in kani yahay kan kaliya ee ka shaqeeya gobolka - maxaa yeelay inta soo hartay waa kuwa khaas loo leeyahay ama shirkado khaas ah oo gaar loo leeyahay. Kasiinada waxaad ku ciyaari kartaa roulette-ka Mareykanka, blackjack, poker poker iyo mashiinnada ciyaarta.
6. Casino Casino Porto Carras
Khamaarka ugu horreeya ee gaarka loo leeyahay ee ku yaal Griiga Porto Carras wuxuu ku yaal dhismaha Sithonia Hotel Porto Carras, taas oo ah jawharad dhab ah oo Halkidiki ah. Waxaa jira mashiinno naadi ah oo gaaraya 425, miisaska roulette 17, 13 miisaska blackjack 5 iyo miisaska turub. Intaas waxaa sii dheer, waxaa jira qol VIP ah oo loogu talagalay rullaluistemadka sare, halkaas oo ay ku yaalliin saddex miis oo loogu talagalay blackjack, miisaska roulette 5 iyo 1 miiska turubka. Gudaha waxaa si taxaddar leh loogu qaabeeyey qaabka saxda ah ee New Orleans, waxaa jira bar fudud iyo baarar.
7. Porto Rio Hotel & Kasiinada
Kaniisadani waxay ku shaqeysaa hudheel gaar ah, oo kaliya 10 daqiiqado u jirta bartamaha Patra. Dhismuhu wuxuu ku yaal xeeb qurux badan oo ku taal Rio, oo ku taal beero cagaaran oo cagaar ah oo dhererkeedu dhan yahay 35,000 oo mitir murabac ah, oo ku hor yaal qasriga Venetian. Casino Rio waxay bixisaa cayaaro miis oo caadi ah sida blackjack iyo roulette, 279 mashiinada ciyaarta iyo taageerayaasha turubka ayaa miisas sugaya Texas Holdem Poker. Soo-booqdayaashu waxay ciyaari karaan mashiinnada ciyaarta waqti kasta oo ah maalin iyo habeen, maxaa yeelay iyagu waa khamaarka furan 24 saacadood maalintii.
8. Shirkadda Syros
Casino waxay ku taal magaalada Syros Ermoupoli. Kani waa casino cusub oo cusub - wuxuu bilaabay inuu shaqeeyo kaliya bishii Abriil 1997. Sikastaba, waa hoteel hore "Yurub", oo la dhisay 1830. Dhismaha waxaa dib loogu soo celiyay ixtiraam, waxyaabihiisii ​​taariikhiga ahaa iyo kuwa 'Cycladic', haddana waa run jawharad Casino Syros waxay leedahay 26 miis oo loogu talagalay kulamada ugu caansan: roulette, blackjack iyo poker poker, iyo sidoo kale 185 mashiinno naadi.
9. Dammaanadda Dammaanadda Mont Monte
Regency Mont Parnes Casino Resort waxay ku taalaa magaalada Mont Parnes, oo masaafo dhan 17 kiiloomitir u jirta bartamaha Athens. Kaniisadan iyo hudheelka hudheelka ah ee ku yaal mid ka mid ah meelaha ugu caansan uguna caansan Attica basin, waxay leedahay in ka badan taariikh afartan sano ah. Xaqiiqdii, waxay ahayd khamaarkii ugu horreeyay, ee laga furo Griiga. Dhawaan, dhismahan waxaa iibsaday koox ka mid ah Regency Entertainment SA, oo qabtay dhowr hagaajin iyo dayactir, waxayna ku ballaarteen aag dhan 18,000 oo laba jibbaaran. Waqtigaan la joogo, waa casino-ka heerarka caalamiga ah ee ugu sarreeya. Waxaa jira 16 miisas blackjack, miiska roulette 32, miiska 2 ee Punto Banco iyo miiska turub 2, iyo in ka badan 700 boosaska. Macaamiisha khamaarka iyo hudheellada hudheelku sidoo kale way nasin karaan oo waxay ku raaxaysan karaan adeegyada naadiga jimicsiga ee Club Olympus. Ka sokow,
In kasta oo sharciga Giriiggu uusan ka mamnuuci doonin kuwa ka shaqeeya khamaarka inay rukhsad u helaan casinos-ka khadka tooska ah ka shaqeeya ee ka shaqeeya Giriigga, laakiin keli ahaanshaha qamaarka internetka waxaa ku jira koox OPAP ah. Si kastaba ha noqotee, Giriigga, ciyaartoydu waxay isticmaali karaan soo-jeedinno kala duwan oo ah hawlwadeenno ajnabi ah, kuwaas oo ka dhigaya bartaada barta isticmaalayaasha Griigga. Waqtigaan la joogo, waxaa jira 118 casinos online ah oo ciyaarta ku bixiya Ingiriis ama Griig isla markaana aqbala sicirka euro ama dollars US.
Sannadkii 2002, dowladda Giriigga waxay soo saartay sharci si adag u mamnuucaya dhammaan noocyada ciyaaraha elektiroonigga ah. Si kastaba ha noqotee, qodobbada sharcigan waxaa jilciyay Xeerka 2011, kaas oo u oggolaanaya ruqsad siinta hawlwadeennada khamaarka ciyaaraha khadka tooska ah. Laakiin dhab ahaantii, kali ahaanshaha bixinta ciyaaraha khadka tooska ah illaa 2030 oo ay leedahay shirkadda khamaarka ee gobolka Griiga OPAP. Si kastaba ha noqotee, 2013 Maxkamadda Yurub waxay xukuntay in kaligii-siinta OPAP, aysan waafaqsanayn sharciga Midowga Yurub. Marka, sharciga Griiga waa in loo beddelaa iyadoo la raacayo shuruudaha Midowga Yurub, Giriigga waxaa lagu qasbi doonaa inuu u furo suuqiisa tartan shirkadaha kale.
Taariikhda hodanka ah ee casino ee Rhodes
Rhodes Casino waa casaan caan ah oo caan ah Giriigga. Waqti dheer kahor intuusan dhismuhu bilaabin inuu ka shaqeeyo khamaar, halkan hoteel aad uwanaagsan ayaa la furay ilaa iyo May 24, 1927. Tani waxay ku nooleyd shaqsiyaad caan ka ah adduunka oo dhan, sida Winston Churchill, Aristotle Onassis iyo George Papandreou. Hoteelka waxaa lagu arkay dhacdooyin badan oo taariikhi ah, sida saxiixa Dowladdii Israa’iil oo la aasaasay 1948.
Casino Loutraki waxaa loo aqoonsaday inay tahay midka ugu wanaagsan ee deegaanka
Sannadkii 2013, Club Hotel Casino Loutraki waxaa la siiyay Abaalmarinta Caalamiga ah ee Aasaaska Waxbarashada Deegaanka "Key Key ee 2013" si firfircoon uga qayb qaadashada ilaalinta deegaanka. Casino waxaa lagu abaalmariyay horumarinta qorshe howleed ku saabsan horumarinta joogtada ah ee deegaanka ee hay'adooda. Tallaabooyinka la qaaday waxaa loogu talagalay in lagu yareeyo isticmaalka biyaha, isticmaalka hufan ee wax soo saarka qashinka, alaabada nadiifinta, u qeybinta shaqaalaha iyo booqdayaasha ku saabsan ilaalinta deegaanka macluumaadka.
Goobta Giriigga, iyo taariikh nololeed oo kooban
Giriiggu maahan wax iska caadi ah waxaa loogu yeeraa "sariirtii ilbaxnimada reer galbeedka" - halkan 3,000 sano ka hor dhalashadii Ciise ka hor, waxaa jiray ilbaxnimadii ugu horreysay ee jasiiradda Crete, oo loo yaqaan Minoan. Iskusoo wada duuboo, taariikhda Griigga oo naga bartay xitaa buugaagta iskuulka ee taariikhda - sheekooyinka ku saabsan Polis-ka Sparta iyo Athens, gladiator-kan ayaa dagaallamaya, tani waa iska hor imaad nasiib darro ah oo u dhexeeya Boqortooyadii Roomaanka oo ku tiirsanayd laga soo bilaabo 146 AD.
Waa maxay Griiga casriga ah? Hadda waa dalxiis caan ah. Laga soo bilaabo 1924, Giriiggu wuxuu noqday jamhuuriyad baarlamaani ah, 2002-na wuxuu noqday lacagta rasmiga ah ee euro. Giriiggu wuxuu ka kooban yahay 13 daafaha (gobollada), oo ka kooban 51 magac (analogooyinka gobollada Ruushka). Ku dhowaad 98% dadweynaha - Masiixiyiinta Orthodox, iyo fasaxa ugu jecel - Easter.
Casinos iyo khamaarista Giriiga
Xaqiiqda ah in Giriiggu dakhliga ugu badan ka helo dalxiiska ayaa saameyn ku yeeshay aragtida dowladda ee khamaarka. Kasiinadii ugu horreysay waxaa laga furay 1928 agteeda Loutraki (tani waa dalxiis dalxiis oo caan ah oo dalka ku yaal). Tayada adeegyada la bixiyo waa kuwa heer caalami ah ee ugu sareeya, waxayna ka kala yimaadeen noocyo kala duwan oo ciyaaro ah iyo qurxinta dhalaalaya ee hoolalka martida waxay ka bilaabantaa xaalad raynrayn ah.
Maaha wax caan ka ah dalxiisayaasha oo ku raaxeysta qamaarka ku yaal Tesaloniki, oo cinwaankiisu yahay «Regency». Waa kan ugu weyn oo ay ku jiraan marka lagu daro dhammaan khadadka casino oo dhan 3 makhaayado caqli badan, baarar, iyo xitaa dhisme masrax u gaar ah.
Dhowr kiilomitir u jirta Athens, casino «Mont Parnes». Waxay ku taal Buurta Parnassus, waxaadna halkaas ku gaari kartaa oo keliya baabuur xadhig leh. Shaqooyinku waa casaan qurux badan maalin kasta marka laga reebo Arbacada. Waxaad u baahan doontaa baasaboor oo aad fiiriso dharka labiska - isboortiga iyo dharka caadiga ah lama soo dhaweynayo.
Dadka jecel xiisaha iyo waxqabadyada banaanka waxay soo jiitaan xulashada Siroe ee jasiiradda Ermoupoli. Halkan, marka lagu daro 3 qolalka raaxada leh ee raaxada ah ee ku yaal dhismayaasha qarnigii 19aad, waxaad ku raaxeysan kartaa safar lama ilaawaan ah oo doon iyo socod ku dhex socda galgalaga dhulka hoostiisa.
Shirkadda ugu weyn waxay ku hawlan tahay ururka ciyaaraha khamaarka ee Giriigga, oo loo yaqaanno xaday.
Ciyaaraha online ee Greece
Sidii aan hore u soo sheegnay, hanti-goosadka ugu weyn dalka - waa urur xaday. Waxay ahayd iyada oo hadda gacanta ku haysa qaybta libaax ee khamaarka internetka. Ururka Khamaarista Remote RGA xaaladdan sida la fahmi karo ma jecla, laakiin waa mid maxalli ah iyada oo aan runtii la doonaynin in loo oggolaado qolalka qamaarka Yurub.
Halkan waxaad ka ciyaari kartaa khadka tooska ah ee internetka, laakiin kaliya goobaha la oggol yahay. Giriiggu wuxuu sameeyaa dhammaan lacagtaas aan waddanka ka bixin. Sidaa darteed, hawlwadeennada casino ee caadiga ah waa inay iska daayaan waqtiga fasaxa, laakiin waxaa jira fursad lagu tijaabiyo dhadhanka maxalliga ah oo weli 100% hubaal ka ah dammaanadda bixinta guulaha.
Athens ayaa si fudud uga faaidaysta nooc kasta oo soo jiidasho leh.
Acropolis . Waxaa ka mid ah 4 dhisme: irridda weyn (propylene), macbud lagu sharfo sharfnaanta Athens, Parthenon, macbud lagu sharfo Goddess of Victory, iyo Erechtheum Palace oo lagu maamuuso Poseidon iyo Athena. Haybada dhismayaasha waa mid soo jiidasho leh oo cajaa'ib leh, marka la arko aragtida waxay qaadan doontaa ugu yaraan 4-5 saacadood.
Macbadka Zeus . Goobta: agagaarka Acropolis iyo Syntagma, waa barxada weyn ee magaalada. Waqtigan xaadirka ah, macbudkii hore ee sharafta lahaa wuxuu ahaa burburay oo keliya. Laakiin waa inaan dhahaa haybad aan ka yareyn oo runtii looga baahan yahay daawashada.
Matxafka Carruurta . Cinwaanka: Kydathenaeon, 14; Plaka. Tan iyo 1987 dii matxafku wuxuu ka farxiyaa dadka waaweyn ee ka daalay aragtida burburka qadiimiga ah iyo taalooyinka iyo tiirarka, dabcan, dhalinyarada soo booqata. Had iyo jeer waxbaa socda: dhammaan noocyada aqoon isweydaarsiyo, bandhigyo iyo bandhigyo.
Matxafka Taariikhda Giriigga Giriigga . Cinwaanka: 7, Dimokritou. Madxafka oo laga soo ururiyey in ka badan 250,000 oo walxaha dharka ah oo ka yimid xilli kasta. Qof kasta oo xiiseynaya moodada ayaa xiiso u yeelan doona inuu arko qaabka horumarka Griigga.
Matxafka Ciidanka ee Giriigga . Cinwaanka: isgoysyada Vassilissis Sophias Av. iyo Rizari, 2. Griiga sidaan wada ognahay wuxuu caan ku yahay arimaha militariga. Halkan waxaad ka heli kartaa dhammaan wixii la xiriira arrimaha militariga, laga soo bilaabo kaararka iyo lebiska illaa dirayska taariikhiga ah.
Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan Giriigga iyo Giriigta
Cabitaanka ugu jecel -Caffee. Waxaa lagu cabayaa dhammaan noocyada kala duwan ee macno ahaan litir, laakiin shaaha lama ixtiraamo;
Cuntada ugu wanaagsan ee Giriigga souvlaki, kebab yaryar oo ku yaalo qashinka khafiifka ah, badanaa doofaarka;
In ka badan maalmaha 250 ee qorraxda sannadkiiba, waxaa jira albaabbo badan oo cadceedda ah oo saqafyada guryaha ah;
Badda ma aha wax ka badan 136 km, iyo meel kasta oo dalka ka mid ah;
Marka la eego tirooyinka isqaba ee Greece ayaa ugu dambeyntii ka mid ah Midowga Yurub;
Inaad noqoto macallin ama takhtar, laakiin guud ahaan dhammaan xirfadlaha miisaaniyadda waa mid aad u saraysa oo si fiican u bixiya;
"Ne" waa Giriig noo ah "haa";
Iskuulka, baro luqadaha 2, oo ka mid ah Ingiriisi waa qasab;
Griiggu waa dad aad u diin badan - maalin walba iskuulka kahor intaan fasalada la aqrin ducada, ciidaha ugu jecel - Easter.
Rhodes waa goob caan ah oo loogu talagalay malaayiin balanbaal ah oo halkan u soo socda
Greece on Map ee Europe
0.1 Liiska Saacadaha 10 Goobaha Goobta Kubadda Cagta ee Giriigta
2.0.1 Goobta Giriigga, iyo taariikh nololeed oo kooban
2.1 Casinos iyo khamaarista Giriiga
2.2 Ciyaaraha online ee Greece
2.2.1 Soojiidashada Athens
2.2.2 Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan Giriigga iyo Giriigta
2.2.3 Greece on Map ee Europe